निजी आवास निर्माणको काम यसै वर्ष सक्छौं: सुशील ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता) - Janata Times
निजी आवास निर्माणको काम यसै वर्ष सक्छौं: सुशील ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)
भूकम्पपछिको पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने गरी २०७२ साल असारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष पुग्न लागेको छ, तर पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक छैन । यस अवधिमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने पाँच पटक परिवर्तन भइसकेका छन् । पहिलो डा. गोविन्दराज पोखरेल, त्यसपछि सुशील ज्ञवाली, त्यसपछि पुन: पोखरेल अनि युवराज भुसाल र फेरि अहिले ज्ञवाली प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुनुलाई नेतृत्व परिवर्तनलाई एउटा कारणको रूपमा लिने गरिएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने निजी आवासको काम अझै पूरा भएको छैन भने पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको काम बल्ल प्रक्रियामा अघि बढेको छ । विशेष गरी निजी आवासको पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती, प्रभावितको जीविकोपार्जन र पुरातात्विक सम्पदा निर्माणलगायतबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी :
एकीकृत बस्ती निर्माणको कामको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिन थालेका छौं ।बढीभन्दा काम गर्नुपर्नेछ । २०७७ साल पुस १० गतेदेखि त पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदैन । त्यसपछि पनि विपद्का अवस्था आउन सक्छन् । यो विपद्को अवस्थामा क्षमता विकास गर्ने कामका लागि अहिलेदेखि दक्षता विकासमा काम अघि बढाएर लग्यौं भने त्यसपछि अबको दिनमा स्थानीय निकाय आफैंले क्षमता वृद्धि गर्न सक्छन् ।
भूकम्पपछिको समय हाम्रो पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थियो । यस क्रममा एकीकृत बस्तीको कुरा पनि आयो । अहिले हामी प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा एकीकृत बस्ती विकास होस् भन्ने पक्षमा छौं । एकीकृत बस्तीमा जनतालाई बाध्य पारेर सार्न त सकिँदैन । जनताका आफ्नै किसिमका समस्या छन् । सामाजिक र समुदायको कुरा छ । यी सबै कुरा हेरेर जानुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले घर सारेर मात्र हुँदैन ।
जीवनशैली, जीवनस्तर र संस्कृतिसँग यो जोडिएको हुन्छ । आर्थिक कुरासँग जोडिएको छ । त्यसैले अहिले हामीले जनतालाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । अनिवार्य रूपमा बाध्यकारी गरेर भन्दा प्रोत्साहित पारेर जानुपर्छ । यसका लागि त्यहाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू सेवा–सुविधा दिलाउनका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने काम अघि बढाएका छौं । सरकारका तर्फबाट भन्नाले केन्द्रमा संघ र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको भूमिका कुरा होला । कतिपय स्थानमा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छ । यो गर्ने गरी एकीकृत बस्तीको निर्देशिका स्वीकृति गरेका छौं । पहिलो चरणमा तराईमा एक घरधुरी बराबर ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँका दरले पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौं । त्यो पैसा स्थानीय तहमा पठाइन्छ ।
जनतालाई सहुलियत ऋण दिने भनियो, तर उपलब्ध गराउन भने सकेनौं । यसमा ठूलो कमजोरी रह्यो । राष्ट्र बैंकमार्फत नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनेका थियौं । हालसम्म १२/१३ सय भन्दा बढीलाई उपलब्ध गराउन सकेनौं । पहिलाको ढंगले हामी सहुलियत ऋण दिन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । निब्यार्जी रूपमा ३ लाख रुपैयाँ दिने कुरा पनि कार्यविधि नबनेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेनौं । म आउनेबित्तिक्कै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरें ।
अहिले हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौं भने बैंकको आधारभूत दरमा २ प्रतिशत थप लाग्ने गरी सहुलियत ऋण दिने भनेका छौं । १५/२५ लाख पनि असोजसम्मका लागि मात्र रहेकाले यसलाई थप्नुपर्छ भनेका छौं, जुन जटिलता छ, यसलाई फुकाएर अघि बढ्नुपर्छ । जुन निब्र्याजी दिने भनेर कागजमा भनियो तर व्यवहारमा भएन । यसमा जुन समस्या भयो, यसबारे छलफल गर्येउ । बैंकसँग, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर के निष्कर्ष निकाल्यौं भने यो निब्र्याजी भनेर जान सक्ने अवस्था विभिन्न कारणवश भएन । कर्जा सुरक्षाको कारण पनि । सामूहिक जमानीमा दिने भन्ने कुराले पनि समस्या ल्यायो । सामूहिक जमानीमा दिन नसक्ने भनेपछि असहजता देखियो, जुन बैंकहरूको आधारभूत दर छ, त्यसमा २ प्रतिशत मात्र थप गरेर ऋण पाउने र त्यो पाउनेमध्ये ५ प्रतिशत अनुदान सहुलियत नेपाल सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने र बाँकी भूकम्पप्रभावितले दिने गरी निर्णय गरेका छौं ।
नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितको ऋणमा ५ प्रतिशत सहुलियत दिन लागेको छ ।अरू पैसा सम्बन्धित घरधनी आफैंले बेहोर्नुपर्ने गरेपछि बैंकहरूमा यसमा दिन तयार भएका छन् ।
हामीले जुन पाँच वर्षीय पुनर्निर्माण योजना बनाएका थियौं । अहिले हामी त्यसलाई पुनरावलोकन गरिरहेका छौं । हालसम्म कति काम सम्पन्न गर्येउ, कति काम गर्न बाँकी छ, कति काम विभिन्न सरकारी कार्यालयले नियमित रूपमा गर्दा हुन्छ, कति स्थानीय निकायबाट गर्दा हुन्छ, कति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्दा हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । बजेटमा जुन सरकारलाई दबाब छ, विभिन्न निकायबाट पुनर्निर्माणमा निरन्तरता पाउन सक्नेमा त्यतातिरबाट जाँदा सहज हुन्छ ।
नगई नहुने र अनिवार्य रूपमा जाने कामलाई सम्पन्न गरेर जानुपर्यो । यो समयमा एउटा निश्चित योजना बनाएर जानुपर्छ । कुन कुन चौमासिकमा वा वर्षमा कसरी जान सक्छौं भनेर स्पष्ट योजना बनाएर जानुपर्छ । बजेट कति चाहिने, कहाँबाट ल्याउने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकारले कति गर्ने, गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने हो भने कतिसम्म गर्ने हो ? यी सबै कुरा राम्रोसँग नबनाईकन हुँदैन । यसका आधारमा योजना बनाउने कुरामा हामी गइसकेका छौं । वास्तवमा कति पैसा लाग्छ, त्यसका आधारमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम हुन्छ । त्यसपछाडि हामी गम्भीर हिसाबले जान्छौं । यसमा अर्थमन्त्रालयसँग बसेर छलफल पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायबाट थप पैसा माग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
बस्ती स्थानान्तरणको कुरामा कुनै पनि बस्ती नै अर्को ठाउँमा सार्न चाहेको अवस्थामा उहाँहरूका लागि सरकारले उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । उहाँहरूले खोजेको र नयाँ पायक पर्ने ठाउँलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसो गर्दा पुरानो बस्तीमा पनि खेतीपाती गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यविधि बनाएर अघि बढेका छौं ।
यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो आफन्तको नजिक र उपयुक्त ठाउँमा बस्छु भनेमा जग्गा खरिदका लागि थप २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । करिब ४ हजार घरधुरीजति यस्तो लाभग्राहीको सूची तयार भएको थियो, अहिले २ हजार १२/१३ सय जग्गा खरिद अनुदान र बाँकीले जग्गा व्यवस्था गरेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । बाँकीको हकमा स्थानीय तहलाई ती स्थानान्तरण गर्ने बस्ती वा व्यक्तिहरूका लागि कस्तो जग्गा, कहाँ र कसरी खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लेखेर पठाउन भनेका छौं । छिट्टै यो विषय टुंगोमा जान्छ । कसैले छुट्टै एकीकृत बस्ती बनाउँछौं भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले व्यवस्था गरेअनुसार अघि बढाउँछौं ।
यो कुरा अघि बढाइसकेका छौं । बनिसकेका घरको हकमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा एकमुस्ट ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेर निर्णय गरेका छौं ।
प्राधिकरण ऐन र संसद्ले दिएको जिम्मेवारी के हो भने भूकम्पपछिको भौतिक हिसाबले घरहरूको पुनर्निर्माण पनि हो । त्यसका साथसाथै सामाजिक र आर्थिक पुनस्र्थापना पनि हो । यहाँ के भयो भने सामाजिक र आर्थिक विकासको पाटो ओझेलमा पर्यो । अघिल्लो बेला हुँदा मैले केही कार्यक्रम अघि बढाइसकेको अवस्था थियो । त्यसपछि अघि बढेन । विगतमा काम भएन, अब अगाडि जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । यसका निम्ति योजनाहरू अघि बढाउँदैछौं । विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायसँग छलफलको कार्यक्रम अघि बढिसकेका छन् । सामाजिक र आर्थिक पुनस्र्थापनाको विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सामाजिक–आर्थिक पुनस्र्थापनाका काम अघि बढाउन एउटा युनिट खोल्नेछौं । आर्थिक हिसाबले जीविकोपार्जन अघि बढाउन कस्तो कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ भनेर अघि बढ्नेछौं । मान्छेहरू घरभित्र छिर्नुभयो, ओत लाग्यो तर खानेकुरा त चाहियो । यसका लागि के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको व्यावसायिक सोच कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर यो कुरामा अघि बढ्नुपर्छ । चाहे कृषि, पशुपालन, अन्य कुराहरू के–के हुन सक्छन्, त्यो कुरा अघि बढाउँदैछौं । यसका साथै हालै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न सहुलियत ऋणहरूको कार्यविधि बनाएको छ, हामीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका छौं । यसमा दिने भनिएको सहुलियत ऋण पनि भूकम्पप्रभावितहरूलाई समेत दिने कुरामा हामी अघि बढ्छौं ।
महिला, दलित, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर, विदेशबाट फर्केर आउने लगायतलाई छुट्टै कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमलाई प्राधिकरणको यी कामसँग पनि एकीकृत गरी जनतालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्धका साथै सहुलियत ऋण पनि उपलब्ध गराएर बजारसँग उहाँहरूलाई अन्तर सम्मिलित गराउनेछौं । उहाँहरूलाई हामी व्यावसायिक तालिम पनि उपलब्ध गराउँछौं । यो गर्न सकियो भने दुई वर्षको अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौं ।
यसमा म स्पष्ट छु । पुरातात्विक पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद छैन । हामी मौलिक शैलीमै बनाउने हो । हिजो जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा ल्याउने हो । जुन बनाउँदा परम्परागत शैली छ, निर्माण सामग्री छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा सुनिश्चित गर्ने हो । यसमा केही कुरा थपेर सुरक्षित बनाउने कुरा हो भने थप्ने हो । यसमा एउटा मौलिकतालाई जगेर्ना गर्ने र यसको ऐतिहासिकतालाई बचाउने र अर्को भनेको सुरक्षित बनाउने हो, जसले गर्दा धेरै क्षति बेहोर्नु नपरोस् । पछिल्लो समयमा जुन आरसीसीमा बनाएका पूर्वाधारहरू छन्, ती सबै भत्काउने काम अघि बढेको छ । रानीपोखरीमा महानगरको तर्फबाट भत्काइसकेको अवस्था छ । पुरातात्विक विभागको स्वीकृति लिएर पुरानै शैलीमा बनाउने गरी टेन्डर गर्ने काम सकिएको छ ।
पोखरीको पीँधमा पुरानै अवस्थाको पानी कसरी ल्याउने भनेर यसका लागि अध्ययन गर्ने काम अघि बढाउन लागेका छौं । बालगोपालेश्वर मन्दिर कसरी बनाउने भनेर मल्लीकालीन वा जंगबहादुरको पालाको भन्ने बारेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै टुंगो लाग्छ । यसबारे विज्ञहरूकै दुई थरी राय आइरहेको छ । अर्को पटकको भाइटीकामा रानीपोखरी पानीसहित बन्छ, पहिलो भन्दा सुन्दर र मौलिक रूपमा देख्नु पाउनुहुनेछ । धरहराको पुनर्निर्माण पनि मौलिक शैलीमा अघि बढाउन लागेका छौं । भीमसेन थापाको पालाको उचाइमा हुने गरी टेन्डर स्वीकृति भएर काम अघि बढ्न लागेको छ । यसबारे स्थानीय समुदायसँग पनि यसबारे छलफल भइसकेको छ । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काठहरूबारे सम्झौता भएर अघि बढेको छ ।
यसका लागि पुराना काठका लागि वर्कसपको स्थापना भइसकेको छ भने नयाँ काठको लागि छिट्टै वर्कसप स्थापना गर्छाैं । काष्ठमण्डपमा पहिला काठको प्रबन्ध गरेर मात्र पुनर्निर्माण अघि बढाउने हो । जग्गाको इँटाको सम्झौता पनि भइसकेको छ । राष्ट्रपति भवनको कुरा पनि पहिलाको नभत्काउने रेक्टोफिटिङ गरेर जाने र नयाँ राष्ट्रपति भवन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएको छ । अन्य परम्परागत बस्तीहरूको विकास गर्ने कुरा पनि अघि बढेका छन् ।
एनआरएन पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने भन्छन : नेपाली कला संस्कृति संरक्षणमा प्रवास बस्नेको योगदान अतुलनीय छ
प्रधानमन्त्रीओलीको चीन भ्रमणको तयारी, ६ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने
खाद्य प्रविधि कार्यालय धनगढीले गर्यो नौ व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर
एसईई परीक्षा तालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)